Pregabalin पाउडर को रोगी र चिंता को उपचार | | AASRO पाउडर
/ब्लग/Pregabalin/Pregabalin को बारे मा तपाइँ सबै कुरा जान्नु पर्छ
प्रकाशित 03 / 03 / 2020 by 阿斯劳 मा लेखियो Pregabalin.
1.Pregabalin के हो?
Pregabalin (१148553-50०-8) एक औषधि हो जुन प्राय: विश्वको विभिन्न क्षेत्रहरुमा Lyrica ब्रान्ड अन्तर्गत बेचिन्छ। यो एन्टी-एपिलेप्टिक औषधि हो जुन एन्टिकोनभल्सेन्ट पनि भनिन्छ। औषधि दिमागको आवेगलाई धीमा गर्न प्रयोग गर्दछ जुन दौडहरू निम्त्याउँछ। अर्कोतर्फ, Pregabalin मस्तिष्क रसायनलाई असर गर्दछ कि शरीर को स्नायु प्रणाली भर मा पीडा संकेत पठाउन। औषधी संसारमा फाइब्रोमाइल्जिया, मधुमेह, र मेरुदण्डको चोटपटक दुखाइले हुने स्नायु दुखाइ जस्ता विभिन्न रोगहरूको कारण हुने विभिन्न पीडाको उपचार गर्नको लागि औषधीको रूपमा पनि प्रयोग गरिन्छ।
Pregabalin अवस्थित क्याप्सूल, विस्तारित-रिलीज, वा लामो-अभिनय ट्याबलेट र मौखिक समाधान (तरल) मा। सबै प्रिगाबालिन फारमहरू उस्तै प्रकारले काम गर्दछन्, र तपाईंको डाक्टर तपाईंको अवस्था वा डोज चक्रको अन्त्यसम्ममा के तपाईं प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ त्यसमा निर्भर गर्दछ तपाईंको लागि सही व्यक्ति छनौट गर्न सबैभन्दा उत्तम व्यक्ति हुनेछ। मौखिक औषधि हुनुले धेरै बिरामीहरूका लागि सबै भन्दा राम्रो पीडा औषधिको रूपमा काम गर्दछ जो नियमित इन्जेक्सनको साथ अपूर्वरूप हुन्छन्। औषधिले केही गम्भीर दुष्प्रभावहरू पनि निम्त्याउन सक्छ जब प्रयोग वा दुरुपयोग भयो। निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईं सँधै राम्रा नतीजाहरूको लागि डोज निर्देशनहरू पालना गर्नुहुन्छ।
प्रेगाबालिन (148553-50-8) कमसेकम चार बर्ष उमेर र वयस्कहरूमा पनि शुरुवातको दौराको उपचारमा सहयोग गर्न अन्य औषधीहरूको साथ प्रयोग गर्न सकिन्छ। धेरै वर्षदेखि, औषधीले चिकित्सा जगतमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको छ, जुन यसलाई बजारमा सबैभन्दा शक्तिशाली पीडा-मुक्त औषधि बनाएको छ। औषधि केवल राम्रो नतीजाहरूको लागि डाक्टरको पर्खाइमा लिनु पर्छ। जे होस्, सँधै निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईं प्रिग्याबालिन एक विश्वसनीय विक्रेता वा वरपरको निर्माताबाट पाउनुहुन्छ।
2.कार्यको Pregabalin संयन्त्र
प्रेगाबालिन औषधीहरूको एन्टिकोनभल्सेन्ट वर्गसँग सम्बन्धित छ। सामान्यतया, यस वर्गमा लाग्ने औषधिहरू समान तरिकाले काम गर्दछन् र समान अवस्थाको उपचारमा प्रयोग गर्दछन्। यो अझै स्पष्ट छैन कि कसरी वास्तवमा Pregabalin काम गर्दछ, तर यो शरीर मा क्षतिग्रस्त तंत्रिका शांत गर्न को माध्यम बाट काम गर्ने विश्वास गर्दछ जुन दौरा र पीडा हुन्छ। ड्रगले शरीरमा हुने पीडा कम गर्दछ जुन विभिन्न कारण वा रोगका कारण हुन्छ। Pregabalin को बारे मा अधिक जानकारी को लागी तपाइँको डाक्टर संग कुरा गर्नुहोस्।
संयुक्त राज्य अमेरिका मा, Pregabalin रोगहरु को उपचार मा प्रयोग को लागी अनुमोदन गरिएको छ;
पोस्ट-हर्पेटिक न्युरल्जिया वा दादहरू जुन दाद पछि देखा पर्दछ
मधुमेह न्यूरोपैथी दुखाई र
फिब्रोमायाल्जिया एक स्वास्थ्य अवस्था हो जसमा व्यापक पीडा समावेश हुन्छ, जस्तै मांसपेशिहरु, संयोजी ऊतकहरु मा, वा छिटो को तेज र दर्दनाक प्रतिक्रिया। युरोपमा जस्तै विश्वका अन्य भागहरूमा पनि प्रेगाबालिन चिन्ता डिसअर्डरको उपचारमा प्रयोग गरिन्छ, यो अवस्था जुन अन्य औषधीहरू संयुक्त राज्य अमेरिकामा उपचार गर्न प्रयोग गरिन्छ। माथि उल्लेख गरिए अनुसार, Pregabalin अन्य औषधिहरूको साथ परिणामलाई बढाउन प्रयोग गरीन्छ। डाक्टरहरूले पनि बिरामीहरूलाई औषधी लेख्न सक्छन् विभिन्न उपचारका सर्तहरू जुन Pregabalin द्वारा उपचार वा नियन्त्रण गर्न सकिन्छ।
Pregabalin खुराक उपचार अन्तर्गतको अवस्थामा निर्भर गर्दछ। जे होस्, सबैभन्दा कम खुराक 25mg हो, जबकि अधिकतम प्रति दिन 600mg हो। तपाईको चिकित्सकले तपाईको शर्त जाँच गरे पनी तपाईको लागी सही खुराक सेट गर्दछ। कहिलेकाँही चिकित्सकहरूले तपाईंलाई कम डोजबाट सुरू गर्न सल्लाह दिन्छन् जुन समयको साथ समायोजन गर्न सकिन्छ। केही असाधारण अवस्थाहरूमा, तपाईंको डाक्टरले थप मात्रा बढाउन सक्दछ। को Pregabalin खुराक निम्न प्रकारका छन्:
वयस्क डायबेटिक न्यूरोपैथी खुराक
तत्काल रिलीजको लागि, प्रारम्भिक खुराक 50mgs हो जुन दिनमा तीन पटक लिनुपर्दछ। तपाइँको डाक्टरले 100mg लाई पहिलो हप्ताको भित्र दिनमा तीन पटक लिन डोज बढाउन सक्दछ, जुन तपाइँको शरीरले पहिलो डोजलाई कसरी प्रतिक्रिया दिने भनेर निर्धारण गर्दछ। चिकित्सा परीक्षण उपचारको प्रगति निगरानी गर्न महत्वपूर्ण छ। यस बिन्दुमा, प्रेगाबालिन खुराक प्रति दिन अधिकतम 300mg सम्म तान्न सकिन्छ, तर त्यो समयको साथ हुनु पर्छ। शुरुआतीहरूलाई सँधै सल्लाह दिइन्छ कि साइड इफेक्ट कम गर्न कम डोजबाट सुरू गर्नुहोस्।
विस्तारित-रिलीजको लागि तपाईंले 150mg मौखिक खुराक प्रति दिन एक पटक लिन आवश्यक पर्दछ, र यो सिफारिस गरिन्छ कि तपाईंले यसलाई बेलुकाको खाना पछि लिनुभयो। तपाइँको डाक्टरले दैनिक 330mg को अधिकतम खुराक सम्म खुराक बढाउन सक्छ। खुराकको वृद्धि केवल डाक्टरले तपाइँको प्रगति र Pregabalin लाई तपाइँको शरीरको सहनशीलता जाँच्न पछि मात्र हुन सक्छ। याद गर्नुहोस्, Pregabalin समायोजित नगर्नुहोस् (148553-50-8) तपाइँको डाक्टरको निर्देशन बिना खुराक। यसले गम्भीर साइड इफेक्टहरू निम्त्याउन सक्छ।
जुन दिन तपाई डोज स्विच गर्दै हुनुहुन्छ सामान्य बिहानी डोज लिनुहोस् जुन तपाईको औषधि द्वारा तोकिएको छ र नयाँ साँझको खाना पछि नयाँ खुराक सुरु गर्नुहोस्। चिकित्सा अध्ययनहरूले पत्ता लगाए कि प्रति दिन 600mg सम्मको उच्च खुराक लिनाले कुनै थप फाइदा प्रदान गर्दैन। यसैले, तपाईले सिफारिश गरिएको खुराकमा टाँस्नु पर्छ। अधिकतम 300 प्रति दिन 330gm लिनु पनि सिफारिस गरिदैन किनभने यसले खुराक-आश्रित प्रभावहरू निम्त्याउन सक्छ।
यहाँ खुराक दुई श्रेणिहरुमा बाँडिएको छ, तत्काल रिलीज, र विस्तारित रिलीज, र ती दुवै खुराक मा फरक छ। उदाहरण को लागी, तत्काल रिलीजमा, प्रारम्भिक Pregabalin खुराक 150mg प्रति दिन 300mg हो, जुन एक दिनमा दुई वा तीन पर्चेमा विभाजित हुन्छ। त्यस्तै प्रकारले, खुराकहरू दिन प्रति दिन 300 मा बढाउन सकिन्छ तपाईको शरीरले कसरी प्रारम्भिक खुराकमा प्रतिक्रिया गर्दछ त्यसमा निर्भर गर्दछ। यदि नतीजा प्रभावशाली छ, तब डाक्टरसँग यो बढाउने कुनै कारण छैन। यदि तपाईले कम डोज लिनुभयो र गम्भीर साइड इफेक्टको अनुभव गर्नुभयो भने मेडिसिले थप मात्रा कम गर्न सक्छ।
लगभग दुई देखि चार हप्ता 300mg खुराक लिईसकेपछि, र दुखाइ राहत अपर्याप्त छ, डाक्टरले दिनको दुई वा तीन पटक लिन प्रत्येक दिन लगभग 600mgs लाई बढाउने निर्णय गर्न सक्छ। याद गर्नुहोस्, प्रति दिन 600mg सबै बिरामीहरूको लागि उच्च सिफारिश गरिएको खुराक हो। यस स्तरलाई पार गर्नाले गम्भीर Pregabalin साइड इफेक्ट निम्त्याउन सक्छ, जुन रिभर्स गर्न गाह्रो वा महँगो हुनेछ।
विस्तारित रिलीजको लागि:
यहाँ, प्रारम्भिक Pregabalin खुराक १ 165mg हो जुन प्रति दिन एक पटक लिनुपर्दछ, र यो सिफारिस गरिएको छ कि तपाइँ यसलाई बेलुकाको खाना पछि लिनुहोस्। त्यहाँ खुराक चक्र को पहिलो हप्ता भित्र 330mg गर्न को लागी एक संभावना छ। दुई वा हप्ता सम्म औषधि पछि र दर्दमा कुनै खास सुधार हुन सकेन भने तपाईंको डाक्टरले अधिकतम कुन दिन प्रति दिन 660mgs बढाउन सक्छ। खुराक स्विच गर्दा, बिहान एक तुरुन्त रिलीजको लागि लिनुहोस् त्यसपछि तपाईंको बेलुकाको खाना खाए पछि विस्तारित-रिलीज औषधि सुरू गर्नुहोस्।
मिरगी वयस्क खुराक
मिर्गी उपचारको लागि, प्रारम्भिक मौखिक खुराक प्रति दिन 150mg हो, जुन दुई वा तीन पटकमा विभाजित हुन्छ। अन्य चिकित्सीय खुराकहरूमा जस्तै, डाक्टरले प्रति दिन 600mgs मा खुराक बढाउन सक्छ र दिनको दुई वा तीन पटक लिनको लागि पनि विभाजन गर्नुपर्छ। यहाँ अधिकतम खुराक प्रति दिन 600mg हो।
यस औषधिको दक्षता र प्रभावहरू सबै औषधिको खुराकमा निर्भर छन्। कुनै अध्ययनले प्रेगाबालिनलाई गाबापेन्टिनको संयोजनको महत्त्व प्रमाणित गरेको छैन। यद्यपि तपाईको डाक्टरले तपाईलाई सल्लाह दिन्छ कि कुन औषधि यस औषधिको साथ प्रयोग गर्ने हो।
Fibromyalgia वयस्क खुराक
यहाँ प्रारम्भिक खुराक दिनको दुई पटक is amg लिईन्छ र खुराकको पहिलो हप्तामा दिनको दुई पटक १ 75०mg लाई समायोजित गर्न सकिन्छ। खुराक पनि दिनको दुई पटक लिनको लागि 150mg गर्न थप गर्न सकिन्छ। फाइब्रोमाइल्जिया को लागी अधिकतम खुराक m225०mgs र about००mg देखि 450 to०mg को मर्मत खुराक हो। अर्कोतर्फ, अध्ययनहरूले देखाउँदछ कि प्रति दिन m००mgs लिनाले कुनै अतिरिक्त Pregabalin लाभ प्रदान गर्दैन तर गम्भीर साइड इफेक्टको परिणाम दिन सक्छ।
न्यूरोपैथिक दुखाईको लागि प्रेगबालिन
प्रारम्भिक खुराक प्रति दिन 75mg हो र 150mg प्रति दिन बढाउन सकिन्छ। यदि दुई वा तीन हप्ता खुराक पछि, कुनै उल्लेखनीय सुधार आएको छैन, तब तपाईंको चिकित्सकले 300mgs मा माथि समायोजित गर्न सक्दछ। सिफारिस गरिएको मर्मत खुराक खुराक दिन प्रति 150 बाट 600mg विभाजित खुराकहरू सम्म।
शरीरनिर्माणको लागि दिहाइड्रोबल्डेनोन / DHB को अन्तिम गाइड
चिकित्सा जगतमा, यो स्पष्ट छ कि Pregabalin खुराक र निर्देशनहरूको अनुसरण गर्ने प्रयोगकर्ताहरूको लागि गुणस्तर र प्रभावशाली परिणामहरू प्रदान गर्दछ। 2004 मा यो औषधि पहिलो अनुमोदन भएदेखि, लाखौं बिरामीहरूले Pregabalin बाट लाभान्वित गरेका छन् विशेष गरी बिरामी, हर्पेटिक न्युरोल्जिया वा दाingहरु पछि देखा पर्ने पीडा जस्ता विभिन्न रोगहरुबाट हुने नर्भ दुखाईको प्रबन्ध गर्न। कसरी तपाईंको शरीर Pregabalin साथ प्रतिक्रियामा निर्भर गर्दछ, तपाईं एक धेरै छोटो समयमा परिणामको मजा लिन सक्नुहुन्छ।
पहिलो केही दिनको खुराकले तपाइँको डाक्टरलाई तपाइँको प्रगति मुल्या to्कन गर्ने अवसर दिन्छ कि तपाइँ तलको र माथिल्लो भाग समायोजित गर्ने कि नगर्ने भनेर निर्णय गर्नु अघि। अध्ययनहरूले देखाउँदछ कि तपाईंले खुराकको पहिलो केही दिनहरूमा परिणामहरू अपेक्षा गर्नुपर्दछ। Pregabalin एक द्रुत अभिनय औषधि हो, र तपाईं, को रूप मा, दर्द को शुरुवात केहि दिनहरुमा छुटकारा आशा गर्नुपर्छ। यदि तपाइँले तपाइँको खुराक लिने पहिलो हप्तामा कुनै सुधारको अनुभव गरेन भने, राम्रो परिणामको लागि डोज समायोजित गर्न तपाइँको डाक्टरलाई सूचित गर्नुहोस्। मानव निकाय बिभिन्न छन्, र यो स्वचालित होइन कि तपाईले अरुले लिने चाँडो परिणाम प्राप्त गर्नुहुन्छ। साथै शर्तमा निर्भर गर्दछ जुन तपाईं औषधीको अधीनमा हुनुहुन्छ, नतिजा भिन्न हुनेछ। विशिष्ट केहि Pregabalin परिणामहरू समावेश;
नर्भ दुखाई कम गर्दछ
Pregabalin एक शक्तिशाली औषधि हो जब यो कम पेटिफेरल मधुमेह न्यूरोपैथी, केमोथेरापी प्रेरित न्यूरोपैथिक दर्द, वा Fibromyalgia जस्ता स्नायु क्षतिको परिणामस्वरूप कम गर्ने दर्दको कुरा आउँछ। बिभिन्न अध्ययनहरूले देखाउँदछ कि न्यूरोपैथिक दुखाइ कम गर्न प्रेगगालिन सबैभन्दा प्रभावकारी औषधि हो। पूरक प्रभावकारी रहन्छ जब एक्लो प्रयोग गरिन्छ वा अन्य मेडिकल सप्लीमेन्टहरूसँग मिलाउँदा पनि।
फाइब्रोमायाल्जियाका बिरामीहरूका लागि गुणस्तरीय जीवन बढाउँदछ
माथि उल्लेख गरिए अनुसार, फिब्रोमायाल्जिया एक अवस्था हो जहाँ तपाईं व्याकुल पीडाबाट पीडित हुनुहुन्छ। यसको लक्षणहरूमा निद्रा, थकान, चिन्ता, डिप्रेसन, संयुक्त, र मांसपेशीहरू कडा हुनुको गुणस्तर समावेश छ। औषधिले बिरामीहरूलाई यी सबै प्रभावहरू नियन्त्रण गर्न मद्दत गर्दछ।
एपिलेप्टिक लक्षणहरू लाई कम गर्दछ
एफडीएले Pregabalin स्वीकृत (148553-50-8) मिर्गी को उपचार को लागी। यो औषधि मस्तिष्कमा चोट लागेको कारण आंशिक मिर्गीका बिरामीहरूलाई सिफारिस गरिन्छ। यो मान्छे को लागी एक सहायक थेरपी को रूप मा प्रयोग गरीन्छ कि अन्य एन्टी-एपिलेप्टिक औषधी काम गर्न असफल भयो।
यद्यपि संयुक्त राज्य अमेरिका मा, Pregabalin चिन्ता को स्तर कम गर्न को लागी प्रयोग गरीएको छैन, यूरोप मा, औषधी एक उत्कृष्ट समाधान साबित भएको छ। Pregabalin अफ-लेबल दुनिया को विभिन्न भागहरु मा चिंता विकार को उपचार मा सहयोग गर्न को लागी प्रयोग गरीन्छ। त्यहाँ केहि undocumented उदाहरणहरु छन् जब तपाइँको डाक्टरले यो Pregabalin निर्धारित गर्न को लागी पाउन सक्छ र अझै पनि गुणवत्ता परिणामहरु प्रदान गर्दछ। दुबै अल्पकालीन र दीर्घकालीन चिकित्सा अध्ययनहरूले यो औषधि प्रभावकारी रूपमा व्यक्तिहरूमा मध्यमदेखि गम्भीर चिन्ताको उपचार गर्न सक्ने वयस्कहरूको रूपमा देखाउँछ।
गुणवत्ता Pregabalin परिणाम गोप्य सम्पूर्ण डोज प्रक्रियामा तपाइँको डाक्टर संलग्न छ। Pregabalin खुराक समायोजित नगर्नुहोस् आफ्नो मेडिसिसलाई सूचित नगरी। जति तपाईं सजिलैसँग विभिन्न अनलाइन स्टोरहरूबाट औषधि खरीद गर्न सक्नुहुनेछ, मेडिकल चेक अपको लागि बिना यसलाई लिन सुरु नगर्नुहोस्। यो औषधि विभिन्न कारणहरूले गर्दा भएको पीडा कम गर्न शक्तिशाली छ। केही खेलाडीहरूले मांसपेशियों को दुखाई, र मेरुदण्डमा चोटपटक नियन्त्रण गर्न Pregabalin प्रयोग गर्दछन्, जुन गहन workouts र प्रतिस्पर्धाको कारण सामान्य हो।
6.Pregabalin आधा जीवन
यो एक सक्रिय संग एक द्रुत अभिनय-औषधि हो Pregabalin आधा जीवन6घण्टाको। तसर्थ, उत्तम Pregabalin परिणामहरूको लागि, खुराकहरूलाई दुई वा तीन दिनमा दिन बाँड्नु पर्छ। मौखिक औषधि भएर, यसले तपाईलाई परिणामहरू प्राप्त गर्न सजिलो बनाउँदछ किनकि यसले छोटो अन्त्य आधा जीवन खडा गरेको छ। सधैं तपाइँको डाक्टरले दिएका खुराक निर्देशनहरूमा टाँस्न नबिर्सनुहोस्। यदि तपाईंले न्यूनतम वा उच्चतम खुराक लिनुभयो भने पनि, यो औषधिको आधा जीवन उही नै रहन्छ।
7.Pregabalin साइड इफेक्ट
आज बजारमा रहेका अन्य औषधिहरू जस्तै, Pregabalin ले तपाईंलाई गम्भीर साइड इफेक्ट पनि गर्न सक्छ यदि तपाईंले यसलाई अधिक गर्नुभयो। को बहुमत Pregabalin साइड इफेक्ट दुरुपयोगको परिणामको रूपमा हो वा कहिलेकाँही जब तपाईंको शरीर प्रणाली औषधि संग नकारात्मक प्रतिक्रिया गर्दछ। यसैले यो सँधै कम डोजबाट सुरू गर्न सल्लाह दिइन्छ, जुन तपाईंको शरीरले औषधीमा कसरी प्रतिक्रिया दिन्छ भन्ने अनुगमन गरेपछि तपाईंको चिकित्सकहरूले समायोजित गर्न सक्दछन्। केहि सब भन्दा साधारण Pregabalin पक्ष प्रभावहरु;
चक्कर आउने - कहिलेकाहीं तपाई यो औषधि लिने बित्तिकै निन्द्रा लाग्न सक्छ, तर यो केहि समय पछि हराउन सक्छ।
बान्ता, सुख्खा मुख, र टाउको दुखाइ पनि अन्य व्यापक साइड इफेक्ट हुन् जुन तपाईं यो औषधि लिँदा अनुभव गर्न सक्नुहुन्छ।
धेरै Pregabalin प्रयोगकर्ताहरू बढि भोकको गुनासो गर्छन्, जसले परिणामस्वरूप वजन बढाउँदछ।
मांसपेशीय समन्वयको अभाव, बोली समस्या, र शरीर सन्तुलनको कमीका केसहरू पनि छन्।
यी सबै प्रेगाबालिन साइड इफेक्ट केहि समय पछि गायब हुन्छन्, तर यदि ती अपेक्षाहरू भन्दा लामो रहन्छन् भने तपाईले आफ्नो चिकित्सकलाई सूचित गर्नु पर्छ तपाईलाई सर्त बिग्रन अघि समस्या समाधान गर्न मद्दत पुर्‍याउन। अर्कोतर्फ, त्यहाँ केहि गम्भीर साइड इफेक्टहरू छन् कि तपाईंले आफ्नो मेडिकललाई तुरून्त सम्पर्क गर्नुपर्दछ तपाईंले उनीहरूलाई अनुभव गर्न थाल्नुभयो, र ती समावेश छन्;
दृष्टि समस्याहरु, जब तपाईले दुबै दर्शनको अनुभव गर्न थाल्नुहुन्छ, वा धमिलो दर्शन वा तपाईंको दृष्टिमा कुनै परिवर्तन संकोच नमान्नुहोस्, तुरुन्तै आफ्नो डाक्टरलाई कल गर्नुहोस्।
अनुहार, मुख ओठ, आँखा, घाँटी, जिब्रो, घाँटी, वा टाउकोको सूजन पनि तुरुन्त रिपोर्ट गरिनु पर्दछ।
अन्य गम्भीर साइड इफेक्टहरू; छाला, खुजली, टाउकोको सूजन, तल्लो खुट्टा, हात, र हतियार वा छाती दुखाइ।
शुभ समाचार यो हो कि यी सबै प्रेगाबालिन साइड इफेक्टहरू नियन्त्रण गर्न सकिन्छ यदि तपाईंले समयमै आफ्नो डाक्टरलाई सूचित गर्नुभयो भने केही शर्तहरू समयको साथ हराउनेछ जब तपाईंलाई माथि उल्लेखित उन्नत प्रभावहरूले तपाईंको औषधिलाई सूचित नगरी डोज लिन जारी राख्दैन। तपाईंको डाक्टरले खुराक रोक्न निर्णय गर्न सक्दछ यदि अवस्था अनियन्त्रित छ वा वैकल्पिक, सुरक्षित औषधि तपाईंको लागि सुझाव दिन्छ।
यो एक औषधि हो जुन आफैंमा बजारको सब भन्दा शक्तिशाली एन्टी-मिर्गी औषधी हो। यो विश्वभरि न्यूरोपैथिक पीडा कम गर्न प्रयोग भएको छ, र युरोप जस्ता केही क्षेत्रहरूमा चिन्ताको उपचारको लागि अनुमोदित भएको छ। त्यहाँ धेरै फाइदाहरू छन् जुन तपाईं यो औषधि लिदा आनन्द लिनुहुनेछ, Pregabalin लाभ जुन निम्न अनुसार छन्;
गुणवत्ता परिणामहरू प्रदान गर्दछ
चिकित्सा अध्ययनले प्रमाणित गर्‍यो कि Pregabalin ले यसको सबै प्रयोगकर्ताहरूलाई गुणस्तर परिणाम प्रदान गर्दछ जसले खुराक निर्देशनहरू पालना गर्छन्। ती न्यूरोपैथिक पीडाको लागि प्रयोग गर्नेहरूका लागि, तपाईंले सुधारको अनुभव गर्न सक्नुहुनेछ तपाईंको पहिलो खुराक पिए पनि। पहिलो हप्तामा, तपाईले पूर्ण नतीजा अनुभव गर्न सुरु गर्नुपर्दछ, र यसले मेडिकहरूलाई औषधी प्रक्रियाको मूल्या to्कन गर्ने मौका दिन्छ। कुनै फरक पर्दैन Pregabalin प्रयोगको कारण, परिणामहरू सँधै प्रभावशाली हुन्छन्।
Pregabalin मुख द्वारा प्रशासित, र यसैले, त्यहाँ कुनै पनि इंजेक्शन सामेल छन्। यसैले यो नियमित इन्जेक्सनको साथ असहज भएका प्रयोगकर्ताहरूका लागि उत्तम औषधिको रूपमा काम गर्दछ। तपाईंले कुनै पनि दुखाइको बारेमा चिन्ता लिनुपर्दैन, र तपाईले यो औषधि अन्य औषधीहरूको साथ सजिलैसँग दिन सक्नुहुन्छ जब सम्म तपाईं आफ्नो डाक्टरलाई सूचित गर्नुहुन्छ।
यो एक लामो आधा जीवन छ
अन्य मौखिक औषधीहरूको तुलनामा, Pregabalin तपाइँको शरीर प्रणालीमा लामो सक्रिय जीवन छ, जसले तपाइँलाई स्थिर र गुणस्तर परिणामहरूको आश्वासन दिन्छ। सर्तमा निर्भर गर्दछ जुन तपाईं यो औषधिको साथ व्यवहार गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईले आफ्नो डोज दिनको दुईदेखि तीन पटक मात्र लिनुपर्दछ र कहिलेकाँही प्रति दिन एक पटक साँझको खाना पछि।
तपाईं सजिलै संग गर्न सक्नुहुनेछ Pregabalin पाउडर किन्नुहोस् थोकमा वा केवल धेरै अनलाइन स्टोरहरू वा नजिकको फार्मेसीबाट तपाईंको खुराक चक्रको लागि पर्याप्त छ किनकि यो विश्वका धेरै भागहरूमा कानुनी हो। तपाईंको डाक्टर पनि सही व्यक्ति हुन तपाईंलाई यो किन्न कहाँ देखाउन। यो तपाईं कानून को साथ कुनै विरोध को डर बिना ड्रग खरीद र प्रयोग गर्न को लागी सजिलो बनाउँदछ।
कम गम्भीर साइड इफेक्टहरू
Pregabalin ले तपाईंलाई कम एन्टिकोनभल्सेन्टहरूको तुलनामा कम गम्भीर साइड इफेक्टहरूमा पर्दाफाश गर्दछ। तपाईले सामान्य साइड इफेक्टहरू मात्र अनुभव गर्नुहुनेछ जस्तै सिर दर्द, बान्ता, अन्यहरूका बीच खुराकको पहिलो दिन, र ती हराउनेछन्। अर्कोतर्फ, यदि तपाईंले आफ्नो डाक्टरलाई चाँडै सूचित गर्नुभयो भने, उन्नत प्रभावहरू सजीलै नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। यद्यपि उत्तम अनुभवका लागि यो निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईले आफ्नो चिकित्सकलाई सूचित नगरी कुनै डोज समायोजन प्रयोग गर्नुहुन्न।
विभिन्न प्रिगाबालिन समीक्षालाई हेर्दा, यो स्पष्ट छ कि धेरै प्रयोगकर्ताहरू औषधि लिइसके पछि उनीहरूले प्राप्त गरेको नतिजाबाट सन्तुष्ट छन्। प्रेगाबालिन नियमित तवरमा दुखाइ-हटाउने औषधिको रूपमा प्रयोग गरिन्छ, र यसले अधिकांश प्रयोगकर्ताहरूबाट सकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त गरिरहेको छ। चिकित्सा अनुसन्धानकर्ताहरूले पनि बिभिन्न खोजहरू दायर गरेका छन्, र यही कारण छ कि एफडीएले यसलाई एपिलेप्सी, पोस्ट-हर्पेटिक न्यूरलगिया वा दाद पछि देखा पर्ने पीडा, डायबेटिक न्यूरोपैथी दुखाइ र फिब्रोमायलगियाको उपचारमा प्रयोग गर्न अनुमोदन गर्‍यो।
युरोपमा जस्तै विश्वका अन्य भागहरूमा, वयस्कहरूबीच चिन्ताको उपचारको लागि प्रेगाबालिन स्वीकृत भएको छ। यद्यपि त्यहाँ केहि रिपोर्ट गरिएका केसहरू पनि छन् जहाँ केही प्रयोगकर्ताहरूले ड्रगको साथ खराब अनुभव भोगेका थिए। ड्रग्सले मानव शरीरसँग फरक प्रतिक्रिया गर्दछ, र यो स्वचालित होइन जुन यसले तपाईंको लागि काम गर्दछ किनकी यसले तपाईंको साथीलाई मद्दत गर्‍यो। गम्भीर साइड इफेक्टका अन्य केसहरूलाई ओभरडोज गर्ने र प्रेगेबालिनको दुरुपयोगका लागि जिम्मेवार ठहराइएको छ।
सारांशमा, यो एक उत्तम औषधि हो जब सही रूपमा र सही कारणहरूको लागि प्रयोग गरिन्छ। यसले लाखौं मानिसहरूलाई बिभिन्न रोगहरूबाट पीडितलाई मद्दत गरेको छ, माथि वर्णन गरिए अनुसार। कुनै पनि अन्य औषधि औषधी जस्तो, तपाइँ Pregabalin लिनुहुन्न जब सम्म तपाइँको डाक्टरले यो सिफारिस गर्दैन। यदि तपाईले साइड इफेक्टको अनुभव गर्नुभयो भने तपाईको डाक्टरलाई तुरुन्त सूचित गर्नुहोस् तपाईलाई ती परास्त गर्न मद्दत गर्न।
10।Pregabalin बिक्री को लागी
संसार परिवर्तन हुँदैछ, र आज, तपाईं सक्नुहुन्छ Pregabalin किन्नुहोस् सस्तो मूल्यमा हाम्रो प्लेटफर्ममा अनलाइन। हाम्रो वेबसाइट प्रयोगकर्ता-मैत्री छ, तपाईलाई उत्पादनको अर्को उत्पादनमा पैतृक बनाउनका साथै सेकेन्डमै तपाईंको अर्डर गर्न। तपाईं आफ्नो स्मार्टफोन, ट्याब्लेट, वा तपाईंको ल्यापटप मार्फत हाम्रो वेबसाइट पहुँच गर्न सक्नुहुनेछ। यसको शीर्षमा, हामी संसारभरि र सम्भावित छोटो समयमा पनि वितरण गर्दछौं। तपाईं थोरैमा Pregabalin खरीद गर्न सक्नुहुन्छ वा तपाईको खुराक चक्रको लागि पर्याप्त छ।
हामी यस क्षेत्रमा अग्रणी प्रेगाबालिन आपूर्तिकर्ता हौं, र हाम्रो किफायती मूल्यले हाम्रा उत्पादनहरूको गुणवत्तामा सम्झौता गर्दैन। हामी हाम्रो अनलाइन स्टोरमा विभिन्न गुणस्तरका मेडिकल उत्पादनहरू प्रदान गर्दछौं। जे होस्, हामी जहिले पनि हाम्रा सबै ग्राहकहरुलाई हाम्रो उत्पादन लिन थाल्नु अघि उनीहरूले मेडिकल चेकआउट गरीरहेको सुनिश्चित गर्न सल्लाह दिन्छौं। हाम्रो मेडिकल उत्पादनहरूले दुर्व्यवहार वा प्रयोग गरेको खण्डमा साइड इफेक्ट लिन सक्छ। Pregabalin बिक्री को लागी तपाइँको नजीकको फार्मेसीमा पनि उपलब्ध छ तर निश्चित गर्नुहोस् कि तपाइँ यसलाई एक विश्वसनीय विक्रेताबाट पाउनुहुन्छ। सबै अनलाइन वा शारीरिक मेडिकल स्टोरहरूले गुणस्त उत्पादनहरू प्रस्ताव गर्दैनन्।
11।नर्भ दुखाई र चिन्ताको उपचार गर्न प्रेगबालिन
धेरै वर्षदेखि प्रेग्गालिन चिकित्सा जगतमा अत्याधिक अनिवार्य छ स्नायु दुखाइको उपचारमा, जसलाई सामान्यतया न्यूरोपैथिक पीडा भनिन्छ। औषधि मस्तिष्क रसायनहरू नियन्त्रण गरेर काम गर्दछ जुन तपाईंको स्नायुहरूमा संकेतहरू पठाउँदछ, जसले तपाईंको शरीर प्रणालीमा दुखाइको स्तर कम गर्दछ। संयुक्त राज्य अमेरिकामा एफडीएले एपगेप्सी, फाइब्रोमियाल्जिया, पोस्ट-हर्पेटिक न्यूरलगिया वा दाँत र मधुमेह न्यूरोपैथी दुखाइ पछि हुने पीडा जस्ता विभिन्न रोगहरूको कारण हुने स्नायु दुखाइहरूको उपचारका लागि प्रेगाबालिनलाई अनुमोदन गर्‍यो।
यद्यपि प्रेग्गालिन (१ for148553g50-8०-XNUMX) अमेरिकामा चिन्ताको उपचारको लागि अनुमोदन गरिएको छैन, यद्यपि रिपोर्टहरू छन् कि केही प्रयोगकर्ताहरूले यसलाई नियन्त्रणको लागि अफ-लेबल प्रयोग गर्छन्। युरोपमा जस्तै विश्वका अन्य भागहरूमा, वयस्कहरूमा चिन्ताको उपचारमा प्रेगाबालिन स्वीकारिएको छ। त्यहाँ अपुष्ट रिपोर्टहरू छन् कि Pregabalin डिप्रेशन नियन्त्रण गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ। Pregabalin को बारे मा अधिक जानकारी को लागी, तपाइँको डाक्टर संग सम्पर्क गर्नुहोस् वा आफ्नो फार्मासिष्ट संग परामर्श गर्नुहोस्।
किम, एससी, लन्डन, जेई, र सोलोमन, DH (२०१ 2013) क्लिनिकल सुविधाहरू र औषधी प्रयोग फाइब्रोमाइल्जिया बिरामीहरू बीच नयाँ निर्धारित amitriptyline, duloxetine, gabapentin, वा pregabalin। गठिया हेरचाह र अनुसन्धान, 65(11), 1813-1819।
गुडम्यान, CW, र ब्रेट, AS (२०१ 2017) पीडाको लागि गाबापेन्टिन र प्रिगाबालिन concern बढाइएको छ चिन्ताको कारण? औषधीको नयाँ इङ्गल्याण्ड जर्नल, 377(5), 411-414।
लाम, डीएम, चोई, SW, वोंग, एसएस, इरविन, एमजी, र चेung्ग, CW (२०१ 2015)। विभिन्न शल्य चिकित्सा कोटी अन्तर्गत तीव्र postoperative पीडा मा Pregabalin को प्रभावकारिता: एक मेटा-विश्लेषण। चिकित्सा, 94(46)।
बाल्डविन, डीएस, अजेल, के।, मसद्रकिस, भिजी, नावाक, एम, र रफिक, आर। (२०१ 2013) सामान्यीकृत चिन्ता विकारको उपचारको लागि Pregabalin: एक अपडेट। न्यूरोसाइकट्रिक रोग र उपचार, 9, 883।
महिलाहरु को लागि प्रोमो (मेथेनलोन एसीटेट) को एक सुरक्षित एनाबिक स्टेरॉयड मध्ये एक
के महिलाहरूले प्रमोबोलान (मेथेनलोन एसीटेट) लिन सक्छन्?
स्टेरॉयड चक्र को काटने मा Primobolan को सबै भन्दा व्यापक उपयोग एनाबिक स्टेरॉयड हो
ओर्लिस्टेटले वजन घटाउने औषधिको रूपमा कसरी काम गर्दछ?	"युवाको फोहरा": पूरकको रूपमा NAD + र NMN